နှစ်ခြောက်ဆယ်ကျော်တွင် ပထမဆုံး အမျိုးသမီးဝန်ကြီး ဒေါ်မြတ်မြတ်အုန်းခင်
Home ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ စီးပွားရေးသတင်း ဆောင်းပါး မြန်မာနှင့် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ သတင်းပြည်တွင်းသတင်း ဒေသန္တရသတင်း ပြည်သူ့အသံ ကမ္ဘာ့သတင်း ကြားဖြတ်နှင့် သတင်းအကျဉ်း ရသသတင်း နာရေးသတင်း အားကစားသတင်း အမှားပြင်ဆင်ချက် အင်တာဗျူး အထူးကဏ္ဍပြည်သူ့စစ်သား သုတေသနနာဂစ် ၁ နှစ်ပြည့် အမေရိကန် ပေါ်လစီနှင့် မြန်မာရေးရာ ကမ္ဘာ့ ဘဏ္ဍာရေး အကျပ်အတည်း ၈ လေးလုံး အထူး အာဇာနည်နေ့အထူး အမေဒေါ်အမာ အထူး ဆန္ဒခံယူပွဲအထူး ကမ္ဘာ့ဖလား ၂၀၁၀ မြစ်ဆုံ ရေကာတာ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲရွေးကောက်ပွဲ သတင်းဖြစ်စဉ်များ ရွေးကောက်ပွဲတွင်း တင်ဆက်မှု ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်လိုသူများ ရွေးကောက်ပွဲ မဝင်သူများ ပါတီအကြောင်း သိကောင်းစရာ ရွေးကောက်ပွဲ အထူး လွတ်မြောက်မှုသို့ သိုမှီးရာရန်ကုန်နှင့်မုန်တိုင်း မြန်မာပြည်နှင့် သက်ဆိုင်သော ကြေးနန်းများ အိုဘားမား မြန်မာ ခရီးစဉ် အာဘော်နှင့်အမြင်ဆောင်းပါး အယ်ဒီတာ့ထံပေးစာ အယ်ဒီတာ့အာဘော် သဘောထားအမြင် ညွှန်းဆိုရာ ရသဘဏ်တိုက်ကဗျာ ပြဇာတ် စာအုပ်စင် ရုပ်ရှင် ခရီးသွားဆောင်းပါး မားလ်တီမီဒီယာဗီဒီယို Photo EssayPhoto Essay. ဓါတ်ပုံ ကာတွန်း ဂျာနယ် မဇ္ဈိမ ရေဒီယို မဇ္ဈိမတီဗီRFA & Mizzima TV Voter Voices Mizzima TV Weekly: Business News ကြေညာချက် Home > သတင်း > ပြည်တွင်းသတင်း > နှစ်ခြောက်ဆယ်ကျော်တွင် ပထမဆုံး အမျိုးသမီးဝန်ကြီး ဒေါ်မြတ်မြတ်အုန်းခင်
နှစ်ခြောက်ဆယ်ကျော်တွင် ပထမဆုံး အမျိုးသမီးဝန်ကြီး ဒေါ်မြတ်မြတ်အုန်းခင်	မြတ်ကျော်သူ	| သောကြာနေ့၊ စက်တင်ဘာလ ၀၇ ရက် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ၁၉ နာရီ ၁၀ မိနစ်	ရန်ကုန် (မဇ္ဈိမ) ။ ။ သမ္မတဦးသိန်းစိန်၏ ကက်ဘိနက်အဖွဲ့ အပြောင်းအလဲတွင် ဒေါ်မြတ်မြတ်အုန်းခင်သည် လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီး ဖြစ်လာရာ နှစ်ပေါင်းခြောက်ဆယ်ကျော်တွင် ပထမဆုံး ပြည်ထောင်စုအဆင့် အမျိုးသမီး ဝန်ကြီး ခန့်အပ်ခံရခြင်း ဖြစ်သည်။သြဂုတ်လ ၄ ရက်နေ့က ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်က အတည်ပြုပေးခဲ့သော ဝန်ကြီးနှင့် ဒုတိယစာရင်းအရ ယခင် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီးဖြစ်သော ဒေါ်မြတ်မြတ်အုန်းခင်မှာ ရာထူးတိုးကာ လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီး ဖြစ်သွားသည်။၁၉၄၈ ခုနှစ် လွတ်လပ်ရေးရပြီးချိန်ကစ၍ ယနေ့အထိ ရေတွက်လျှင် အာဏာသိမ်း စစ်အစိုးရများ အပါအဝင် အစိုးရ ခုနှစ်ခုမြောက်ဖြစ်နေချိန်တွင် ဗဟိုအစိုးရတွင် အမျိုးသမီးဝန်ကြီး ရရှိသည်မှာ ယခုတစ်ကြိမ်သာ ဖြစ်သည်။“မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ သမိုင်းမှာ၊ ကျွန်တော်ကြုံခဲ့သလောက် အမြင့်ဆုံးအနေနဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ် အဖြစ် ဒေါ်ခင်ကြည် ဖြစ်ဖူးတာပဲရှိတယ်၊ ဒိအပြင်တော့ အမျိုးသမီးတွေကို ဝန်ကြီးရာထူးမျိုးပေးတာတော့ မရှိဘူး” ဟု အတိုက်အခံပါတီ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၏ အကြီးတန်းခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်သော ဦးဝင်းတင် ကပြောသည်။လက်နက်ကိုင် တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့များနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးမှု၏ လုပ်ငန်းစဉ်အောက် ပြန်လည်ထူထောင်ရေး လုပ်ရန် အစိုးရအဖွဲ့တွင် ဘတ်ဂျက်အခက်အခဲရှိနေသည်ဟု ထုတ်ဖော်ပြောထားသည့် သမ္မတဦးသိန်းစိန်၏ ဝန်ကြီး ဌာနနှင့် ဝန်ကြီးအပြောင်းအလဲမှာ ဝန်ကြီးအရေအတွက် ပိုလာသည်။ လွန်ခဲ့သည့်တစ်နှစ်ခွဲက အရပ်သားဟန်ပြောင်းပြီး အစိုးရသစ်ဖွဲ့စဉ်က ဝန်ကြီးဌာန ၃၄ ခုနှင့် ဝန်ကြီး ၃ဝ ဦးရှိခဲ့ရာက ယခုတွင် ဝန်ကြီးဌာန ၃၁ ခုနှင့် ဝန်ကြီး ၃၆ ဦး ဖြစ်လာခဲ့သည်။ရှမ်းသံတော်ဆင့်သတင်းက ထုတ်ပြန်ထားသော ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံးနှင့် သမ္မတဦးသိန်းစိန်တို့၏ ဆွေးနွေးပွဲ တွင် သမ္မတက “တိုင်းရင်းသားတွေ ပြန်ရောက်လာရင် စားဖို့အတွက် ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။ နေဖို့အတွက် ဘယ်လို လုပ်ကြမလဲ။ ရေတိုစားဖို့အတွက် ရေရှည်စားဖို့အတွက် ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။ Donor Country တွေလည်း ကျနော် တို့ ခေါ်ရပါမယ်။ ကျနော်တို့ချည်းပဲ မတတ်နိုင်ဘူး။ ဒါကို ကျနော်ရိုးရိုးသားသားနဲ့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောရမယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့ Budget လည်း ကုန်လုနီးပါး ဖြစ်နေပြီ။ မတတ်နိုင်တော့ Donor Country တွေကို ကျနော်တို့က ရှာရမယ်။ ရှာတော့ နိုင်ငံ လေးငါးခြောက် နိုင်ငံလောက်ကတော့ ကျနော်တို့ကို ကူညီဖို့ အသင့်ရှိနေပြီ။” ဟု ပြောသွားသည်။ပြန်ကြားရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှု၊ အလုပ်သမားနှင့် လူမှုဝန်ထမ်း ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေး၊ ဟိုတယ် ခရီးနှင့် အားကစား၊ အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုနှင့် မွေးမြူရေးနှင့် ရေလုပ်ငန်းတို့ကို ဝန်ကြီး တစ်ဦးထဲက ဌာနနှစ်ခုတွဲ ကိုင်ရာက ဌာနတစ်ခု ဝန်ကြီးတစ်ဦးသို့ နေရာပေးလိုက်သည်။သို့သော် အလုပ်မဖြစ်သော စက်မှုဖွံဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာနကို ဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီး ထုတ်လုပ်ရေးနှင့် ဖြန့်ဖြူးရေးအတွက်နှစ်ပိုင်းခွဲထားသော လျှပ်စစ်ဝန်ကြီးဌာနကို တစ်ခုတည်းအဖြစ် ပြန်လည်ပြောင်းလိုက်သည်။ သမ္မတရုံးဝန်ကြီးနောက်ထပ် လေးဦး ထပ်ဖြည့်လိုက်သည်။အသစ်ပြောင်းလဲခန့်အပ်လိုက်သော ဒုတိယဝန်ကြီး ၁၅ နေရာတွင် အမျိုးသမီးဝန်ကြီး လေးဦးပါလာသည်။ဒေါက်တာ ဒေါ်ခင်စန်းရီ (စီမံ/စီးပွား ဝန်ကြီးဌာန)၊ ဒေါ်စုစုလှိုင်(လူမှု/ဝန်ထမ်းဝန်ကြီးဌာန)၊ ဒေါက်တာဒေါ်သက်သက်ဇင် (ပတ်ဝန်းကျင်/သစ်တော) ဒေါက်တာဒေါ်သိန်းသိန်းဌေး (ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန) တို့ဖြစ်ကြသည်။အမျိုးသမီးများကို နိုင်ငံ့ဦးဆောင်မှုတွင် နေရာပေးမှု နည်းနေသေးသည်ဟု ဝေဖန်ကြသည်။“အမှန်က အမျိုးသမီးတွေကို ဝန်ကြီးအဆင့်အနေနဲ့ ဒိထက်ပိုပြီး မျှော်လင့်ခဲ့ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ဖြစ်လာတော့ တစ်ယောက်တည်း၊ ပြီးတော့ ကြံ့ခိုင်ရေးက၊ နိုင်ငံတကာ စံနှုန်းနဲ့ဆိုရင် အစိုးရအဖွဲ့မှာ အမျိုးသမီး အရေအတွက်က သုံးပုံတစ်ပုံ ရှိနေရမှာ၊ ခု ဒီအရေအတွက်က အရမ်းနည်းနေပါသေးတယ်” ဟု ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် အမတ် ဒေါက်တာဒေါ်ညိုညိုသင်းက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။၂၀၁၂ ခုနှစ်ထုတ် ပါလီမန်ဆိုင်ရာသမဂ္ဂ၏ အစီရင်ခံစာတစ်ခုအရ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အမျိုးသမီးများ ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်မှုမှာ နိုင်ငံပေါင်း ၁၄၄ နိုင်ငံအနက် ၁၃၂ နိုင်ငံစာရင်းတွင်သာရှိသည်ဟုဆိုသည်။ခုနှစ်ဦးပါ ပြည်ထောင်စု တရားလွှတ်တော်ချုပ် တရားသူကြီးများတွင်လည်း အမျိုးသမီးတဦးမှ ပါဝင်ခြင်းမရှိပါ။အောက်လွှတ်တော် အမတ် ၄၄၀ ဦးအနက် အမျိုးသမီးအမတ် ၂၆ ဦး ပါဝင်၍ ၆ ရာခိုင်နှုန်းသာရှိသလို အထက် လွှတ်တော်အမတ် ၂၂၄ ဦးအနက် အမျိုးသမီးအမတ် ၄ ဦးသာပါဝင်၍ ၁.၈ ရာခိုင်နှုန်းသာရှိသည်။ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်တရပ်လုံး အနေဖြင့် အမျိုးသမီးပါဝင်မှု ၄.၅ ရာခိုင်နှုန်းသာဖြစ်သည်။“အမျိုးသမီးတစ်ယောက် ဖြစ်လာတော့ အခွင့်အရေးတွေကလည်း အမြင့်ဆုံးလို့ ပြောလို့ရတာပေါ့၊ ဒါပေမယ့် အမျိုးသားဝန်ကြီးတွေကြားထဲမှာ အမျိုးသမီး တစ်ဦးတည်းဖြစ်တာဆိုတော့ အားနည်းတာပေါ့၊ အမှန်တကယ်က လေး၊ ငါးယောက်လောက်မှ ပိုကောင်းမယ်” ဟု အောက်လွှတ်တော်အမတ် ဒေါ်နန်းဝါနု က ပြောသည်။
KIO က အစိုးရ ငြိမ်းအဖွဲ့နှင့် ပြန်လည်တွေ့ဆုံရန် အဆင်သင့် မဖြစ်သေး	နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးမှုများ အဆင့်သုံးဆင့်ဖြင့် လုပ်ဆောင်သွားမည်	အိန္ဒိယ ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် မြန်မာသမ္မတတို့ သီးသန့်တွေ့ဆုံ	သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အား အိန္ဒိယ လုပ်ငန်းရှင်များက ညစာစားပွဲဖြင့် ဧည့်ခံမည်	ဦးသိန်းစိန် ဖိတ်ကြားချက်အရ OIC အတွင်းရေးမှူးချုပ် မြန်မာပြည် လာမည်	ဦးသိန်းစိန် အိန္ဒိယ မလာမီ နယူးဒေလီရှိ မြန်မာများ ကြိုတင်ဆန္ဒပြ	ဦးသိန်းစိန် မလာမီ နယူးဒေလီမှာ ထိုင်သပိတ် စတင်နေ Who is Online
We have 119 guests online	www.bysjl.com	© Copyright 1998 - 2012 Mizzima News. All Rights Reserved